एन्फा कप २०७५ मा बैजनाथ मावि र फ्लोरिडा ईन्टरनेशनल विजयी ।।
विकाश सिंह महता, कञ्चनपुर, २० असार । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित खुलामञ्चमा सम्पन्न एन्फा कप २०७५ मा बैजनाथ मावि र फ्लोरिडा ईन्टरनेशनल विजयी भएका छन् । मंगलबार भएको फाइनल खेलमा छात्रा तर्फ बैजनाथ मावि जडेपानी र लक्ष्मी मावि खैरभट्टीका बीच भएको खेलमा २–० गोल अन्तरले बैजनाथ मावि उपाधी चुम्न सफल भएको छ । उक्त खेलमा जर्सी नं. ३२ की पार्वती दमाईले पहिलो गोल गरिन् भने जर्सी नं. ७ कि भावना पातलीले दोस्रो गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई उपाधि दिलाउन सफल भएकी छन् ।
त्यसैगरी मंगलबार भएको छात्र तर्फको खेलमा फ्लोरिडा ईन्टरनेशनल बोडिङ्ग माध्यमिक विद्यालय र बैजनाथ मावि जडेपानी बीच भएको खेलमा २–१ को गोल अन्तरले फ्लोरिडा ईन्टरनेशनल बोडिङ्ग माध्यमिक विद्यालयले उपाधी हात पार्न सफल भएको छ । उक्त खेलमा फ्लोरिडा ईन्टरनेशनल बोडिङ्ग माध्यमिक विद्यालयका जर्सी नं. ७ का कृष्ण परियारले आफ्नो टिमलाई २ गोल गर्दै विजय हासिल गर्न सफल भएका छन् । बैजनाथ माविको तर्फबाट जर्सी नं. ७ का टिम क्याप्टेन विशाल साहुले १ गोल गरेका थिए ।
प्रत्योगिताका उत्कृष्ट खेलाडी छात्रा तर्फ ईन्टरनेश्नल पब्लिक स्कुलका कुशल देउवा भएका छन् भने छात्रा तर्फ लक्ष्मी माविकी टिम क्याप्टेन पूजा ओड भएकी छन् । उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई कञ्चन समाजका तर्फबाट सहकोषाध्यक्ष शंकर चन्दले ट्रफी हस्तान्तरण गरेका थिए । भने फाइनल खेलका म्यान अफ द म्याच छात्र तर्फ फ्लोरिडा ईन्टरनेशनल बोडिङ्ग माध्यमिक विद्यालयका जर्सी नं. ३ का राकेश खत्री र छात्रा तर्फ बैजनाथ माविकी जर्सी नं. ७ की भावना पातली भएकी छन् । ती खेलाडीलाई कञ्चन एकेडेमीको तर्फबाट ट्रफी हस्तान्तरण गरिएको थियो । विजयी टिमहरुलाई टुवोर्ग वियरले एकएक बल र प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई एकएक जोर फुटबल सुज प्रदान गरेको थियो ।
कञ्चनपुर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष शेर बहादुर चन्दले विजयी विद्यालयका टिमहरुलाई मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । साथै विजयी टिमहरुले क्षेत्रिय प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाउने भएका छन् । एन्फा कप २०७५ अन्तर विद्यालय स्तरीय छात्र तथा छात्रा फुटबल प्रतियोगिता असार १३ गते देखि सञ्चालन भई मंगलबार सम्पन्न भएको हो । एन्फा कप २०७५ अन्तर विद्यालय स्तरीय छात्र तथा छात्रा फुटबल प्रतियोगितामा कञ्चनपुरका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरु गरी १६ विद्यालयहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मंगलबार भएको प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रमका सभापति कञ्चनपुर फुटबल संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेन्द्र राज पाण्डेय रहनु भएको थियो भने प्रमुख अतिथि कञ्चनपुर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष शेर बहादुर चन्द रहनु भएको थियो । त्यसैगरी अतिथिमा फुटबल संघका पूर्व अध्यक्ष भिम बहादुर थापा लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो । स्वागत मन्तव्य फुटबल संघका महासचिव रमेश चन्दले गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन नरेन्द्र जाशीले गर्नु भएको थियो ।